सञ्चालन प्रणाली कस्तो हो
सबै गणनाको उपकरणहरू काम नियन्त्रण कार्यक्रम बिना असम्भव छ। यी हुन् प्रणाली सञ्चालन। कम्प्युटरमा के छ? यो एक जटिल प्रणाली फरक विशेष एकाइहरु नोड्स, भनिन्छ घटक को एक ठूलो संख्या को निर्वाचकगण छ। उदाहरणका लागि, बिजुली आपूर्ति एसी mains को घटक को कार्यका लागि आवश्यक अचल को एक नम्बर मा वोल्ट 220 को भोल्टेज धर्मान्तरित; ग्राफिक्स कार्ड तस्बिरहरू प्रक्रियाहरु र मनिटर स्क्रिनमा प्रदर्शित गर्दछ; सीपीयू गणना संलग्न र यति मा। अर्को शब्दमा, कम्प्युटर प्रणाली एकल उपकरण मा एकीकृत हार्डवेयर घटक को एक संग्रह छ। सबै एकाइहरूको काम सह-ordinate, एक अपरेटिङ सिस्टम आवश्यक छ। एउटा महत्त्वपूर्ण बिन्दु: तिनीहरूलाई (शब्द लम्बाइ विषय, र अन्य आवश्यकताहरु) को कुनै एक कम्प्युटर मा स्थापित गर्न सकिन्छ।
शब्द "अपरेटिङ सिस्टम" को समझ सरल बनाउन, तपाईं एक मानिसको analogy प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ: कम्प्युटर को हार्डवेयर - यो शरीर; नियन्त्रण कार्यक्रम - एक स्नायु प्रणाली र मस्तिष्क reflexes एक सेट संग; र आवेदन कार्यक्रम विचार, मनसाय, विचार प्रस्तुत गरिएको छ। reflexes - - शरीर (कार्य) विचार: एक टोली वर्गीकरणका गठन। निस्सन्देह, यो व्याख्या मात्र आरक्षण संग साँचो हो, तर के अपरेटिङ सिस्टम व्याख्या गर्न "को औंलाहरु मा" अनुमति दिन्छ। वास्तवमा, तिनीहरू कार्यक्रम घटक र प्रयोगकर्ता बीच बफर एक प्रकारको छन्।
कुनै पनि आवेदन सञ्चालन प्रणाली बाहिर गर्न सकिन्छ। पनि प्रारम्भिक दिनमा कम्प्युटिङको, विन्डोज, लिनक्स हुँदा, म्याक ओएस काम डस गर्न सम्भव धन्यवाद छ। खैर, यो गरयो डिस्क संचालन प्रणाली लागि खडा छ।
वास्तविक-समय विभाजन, ब्याच जब संग: काम को विधि अनुसार, सबै त्यस्ता समाधान तीन समूह विभाजन गर्न सकिन्छ। पहिलो प्रयोगकर्ता अन्तरक्रिया अनुमति छ (वा बाह्य टर्मिनलहरु) प्रदर्शन गणना को प्रक्रिया मा। तदनुसार, परिणाम परिवर्तन। समय साझेदारी धेरै कार्यहरू को कार्यान्वयन समावेश, तर छिटो तिनीहरूलाई बीच प्रोसेसर स्विच संग निरन्तरता को भ्रम सिर्जना गर्छ। यो हस्तक्षेप पनि सम्भव छ। तर ब्याच प्रक्रिया जब सूची फारम र तिनीहरूलाई गर्न पठाउने छ। सही डाटा प्याकेटहरू बीच अन्तरालहरू मा हुन सक्छ।
, प्रयोगकर्ता र आवेदन कार्यक्रम र हार्डवेयर घटक डाटा आफूलाई बीच धाराहरु: कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टम अन्तरक्रियामा तीन प्रकारका प्रदान गर्दछ। लागि सुविधा को प्रयोगकर्ता ग्राफिकल इन्टरफेस भएको सिर्जित - को सहज सेटको चित्र, प्रतीक, काम संग मानिस उत्पन्न आदेशहरू लागि प्रणाली (मा स्वचालित "पारदर्शी" मोड)। सबै आधुनिक समाधान - अर्थात् ग्राफिक्स। यी विन्डोज, लिनक्स र एप्पल अपरेटिङ सिस्टम को परिवार समावेश गर्नुहोस्। मार्फत काम आदेश लाइन अब अक्सर एक पूरक रूपमा बेचिएको छ। अपवाद - अत्यधिक विशेष उपकरणहरू।
पछि अधिकांश मानिसहरू गर्नुभएन आश्चर्य कसरी काम स्थापित मा कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टम, विकल्प छ मेड, पहिलो सबै लागि, सुविधा को प्रयोग गरेर इन्टरफेस। यसलाई विभिन्न मात्र उपस्थिति मा पनि भाषा हो, तर। यसरी, रूसी अपरेटिङ सिस्टम पूर्व सोभियत संघ मा थप लोकप्रिय छ।
कसरी "windose" पर्दा को पक्ष मा कालो पट्टी हटाउन?
कसरी आफ्नै कम्प्युटरमा मेटिएको फाइल पुन: प्राप्त गर्न?
निर्देशन: कसरी विन्डोज कन्ट्रोल प्यानल खोल्न 8
निरन्तर नयाँ ब्राउजर सञ्झ्यालमा खुला Windows, के गर्ने?
हार्ड डिस्क को टूटने के हो
चाँडै एडी मा blisters निको पार्न कसरी सुझावहरू
आनन्द संग्रहालय: तस्बिर र समीक्षा
कसरी एल्यूमीनियम पन्नी को उपचार पूरा गर्न?
Multivarka मा सूप। आधुनिक Housewives लागि खाना पकाउन व्यञ्जनहरु
कसरी "Sims 3" थपिएको स्थापना गर्न: बयान
विधि र जानकारी सुरक्षा को माध्यम
यसलाई के मतलब काग संग्रह गर्दैन? एक रेस्टुरेन्ट मा काग संग्रह के हो?
Touchless कार धुने: कार्य प्रविधिको भविष्य
को जाडो लागि मीठो टमाटर कसरी खाना पकाउनु?
ग्रहको "Star Wars" चलचित्रहरूमा उल्लेख गरिएका छन्: शीर्षक, वर्णन, रोचक तथ्यहरू